हाम्रो शिक्षा प्रणाली होइन, शिक्षक दोषी हुन्:-डा. बराल - नेपालबहस
हाम्रो शिक्षा प्रणाली होइन, शिक्षक दोषी हुन्:-डा. बराल
मानिसले जबसम्म उत्कृष्ट मातृभाषा नेपाली लेख्न र बोल्न जान्दैन तबसम्म अर्को भाषा उत्कृष्ट लेख्न र बोल्न गाह्रो नै हुन्छ
| १६:३१:०२ मा प्रकाशित
डा. गणेशप्रसाद बराल, धनकुटा जिल्लाको कुरुले तेनुपा, बाजथलामा जन्मिएका डा. गणेशप्रसाद बरालले एसएलसी पछि एच.सी.एफ. र ब्रिटिश प्रोजेक्ट धनकुटामा काम गर्दै काठमाडौंमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका हुन् । पीसकोर्स र भी. एस. ओ. ब्रिटिश प्राेजेक्ट अन्य देशका बिदेशीलाई नेपाली भाषा सिकाउदै अंग्रेजी विषयमा मासर्टस गरेका छन् । उनले त्रीभुवन विश्वविद्यालयमा २२ बर्ष अध्यापन गरेका छन् । अंग्रेजीमा “द अलकेमिष्ट एण्ड कुन्डलिनि योग” मा विद्यावरिधि गरेका बराल आज योग ध्यानमा सरिक छन् ।
युवा अवस्थामा अमेरिका र बेलायत भ्रमण गर्न पुगेका बराल आज नेपालमा नै आफ्नो दैनिकी चलाइरहेका छन् । विदेशमा बस्न रुचि नराख्ने र आफ्नै देशको सेवामा विश्वास राख्ने बराल उमेरले साठी पार भइसकेका छन् । संस्कृत अध्ययन र अंग्रेजी अध्यापन गराउन पाउँदा उनलाई ज्यादै खुशी लाग्छ । नेपलका विभिन्न संघसंथाका पधादिकारीलाई अंग्रेजी अध्यापन, भाषा अनुवाद र पुस्तक लेखनमा दैनिक जीवन व्यतित गरिरहेका बरालसँग नेपालबहस डटकमका लागि सन्तोष खड्काले लिएको अन्तर्वाताको सम्पादित अंशः
१.सरकारी विद्यालयमा पढेकाहरुलाई अंग्रेजी भाषा पढ्न वा सिक्न गाह्रो हुन्छ भन्ने सोच हुन्छ । सरल तरिकाले अंग्रेजी सिक्ने उपाय के छ ?
सरकारी स्कुलमा पढ्नेहरुले एउटा भाषा जानिसकेको हुन्छ । अंग्रेजी सिक्ने एकदम सहज र सरल तरिका छ । कसरी त ? बच्चाहरुलाई शिक्षकले अनुसन्धानात्मक तरिकाले पढाउन सक्ने हुनुपर्छ । शिक्षामा जे सिकियो त्यो मात्र लाद्ने हैन, बच्चाले कसरी सिक्न सक्छ ? त्यो कुरा खोजी गरेर सिकाउने प्रविधिको विकास गर्नुपर्छ ।
२. अंग्रेजी भाषा पहिला बोल्न सिक्ने कि लेख्न ? कुन चाहिँ महत्वपूर्ण सीप हो ?
कुनैपनि भाषा पहिला बोल्न सिक्नु पर्छ । सामान्य बोलचाल गर्ने मानिसले पनि लेख्न सक्छ । जब उसले पढ्न सुरु गर्छ तब शब्दहरु याद गर्छ । त्यसकारण बच्चालाई पहिला भाषा बोल्न नै सिकाउनु पर्छ । त्यसपछि पढ्ने र लेख्ने काम गर्दा राम्रो हुन्छ ।
३. भाषा सिक्नका लागि व्याकरण कतिको जरुरी छ ?
भाषा र व्याकरण आफैंमा दुईवटा चिज पटक्कै होइन । यो भम्र हो । भाषालाई कतिपयले असजिलो बनाउनलाई व्याकरणतिर लगेका हुन्छन् तर भाषा बोल्दा नै व्याकरण हुन्छ । जस्तो सामान्य वर्तमान भन्दा नेपालीले पढाउँदा बरु त्यो नेपालीलाई कठोर भएको छ । तर, एउटा बच्चाले अहिले के गरिरहेको छु, अब म के गर्छु, के गर्ने छु त्यो फटाफट बोलिरहेको हुन्छ । त्यसकारण व्याकरणलाई एकातिर पढाइदिँदा भाषालाई अर्कोतिर लग्दा बच्चामा सिक्ने कुरामा नै द्वन्द उत्पन्न भएर गाह्रो भएको छ । भाषामा नै व्याकरण हुन्छ र व्याकरणमा नै भाषा हुन्छ ।
४ मातृभाषा वा नेपाली भाषाको राम्रो ज्ञान छ भने अंग्रेजी सिक्न केही मद्दत गर्छ ?
यो बच्चाका लागि भन्दा पनि अलिकति ठुलाहरुका लागि लागु हुन्छ । यदि कसैको मातृभाषा (लिम्बु, तामाङ, नेवारी) राम्रो छ, आफ्नो भाषामा बलियो छ । त्यो भाषागत ज्ञान शिक्षकमा पनि छ भने त्यस्ता शिक्षकले अर्को भाषा पढाउँदा सबैभन्दा सहज र सरल तरिकाले मातृभाषामा लगेर सिकाउन सक्छ ।
५. भाषा पढाउँदा अथवा सिकाउँदा ध्यान दिनुपर्ने तीनवटा पक्ष वा कुराहरु के के हुन् ?
भाषा पढाउँदा सबैभन्दा पहिला कसले भाषा सिक्दै छ ? त्यो बच्चा हो वा अलि उमेर गएको मानिस हो ? त्यो कुरालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । भाषा सिक्दा बच्चा हो भने व्याकरणको ज्ञान आदि कुराहरुमा अल्झाउनु हँुदैन । सिधै बोल्ने पक्षमा लैजानु पर्छ । अलिकति उमेर बितेको युवा छ भने एउटा भाषाको उसलाई अनुभव भइसकेको छ । १३ देखि १४ वर्षको उमेरमा एउटा भाषामा मानिस पोख्त भइसकेको हुन्छ ।
पोख्त भइसकेपछि यदि मानिसले अर्को भाषा सिक्छ भने त्यो भाषा सिक्नलाई धेरै सजिलो हुन्छ । अन्तत जुनसुकै भाषामा पनि आफ्नै किसिमको विशेषता हुन्छ । भाषा सुन्दा फरक मात्र हो, भन्न खोजिएको कुरा एउटै हो । भाषा सिक्ने कुरामा मनिस तीनवटा कुरामा पहिला तयार हुनुपर्छ । पहिलो भाषा बोल्न सिक्नु पर्छ, यो निर्विकल्प कुरा हो । स्वअध्यययनले भए पनि, साथीसँग सिकेर भएपनि भाषा बोल्नु पर्छ । बोलेपछि भाषा पढ्नु पर्छ । स्पिकिङ र रिडिङ राम्रो नभईकन राईटिङमा जान गाह्रो हुन्छ ।
६. अंग्रेजी सिक्नै पर्ने कारणहरु के के हुन् ?
अंग्रेजी भाषा सिक्नै पर्छ भन्ने छैन् । सरकार र शिक्षाको नीतिले गर्दा सबैतिर अंग्रेजीलाई अनिवार्य गरिएको हो । एउटा कारण के पनि छ भने नेपालमा सबै पुस्तक उपलब्ध नभएको हुँदा, हाम्रो भाषामा पठनपाठन र सिकाइका पुस्तक नहुँदा हामी अंग्रेजी सिक्न र पढ्न बाध्य छौं । बाहिर मुलुकमा अधिकांशले बोलिने भाषाको तुलनामा हामी अपागं भएर अंग्रेजी भाषा सिक्नु परेको छ ।
अहिलेको अंग्रेजी शिक्षा भनेको सारा ज्ञान (संस्कृत, चाइनीज, जापानिज, बेतायती) सम्पुर्ण पुस्तक अंग्रेजीमा लेखिएको छ । जसले गर्दा हामी अंग्रेजी सिक्न बाध्य छौं । सबै पुस्तकहरु आफ्नो मातृभाषामा उपलब्ध हुनुपर्छ, होइन भने हामीले अंग्रेजी सिक्नै पर्छ ।
७. अवसर र करियरको लागि अंग्रेजी सिक्नु आवश्यक छ ?
करियरको लागि अंग्रेजी आवश्यक छ तर युरोप, जर्मन र फ्रान्स जस्ता देशमा जाने भएमा अंग्रेजी होइन, त्यही देशको भाषा सिक्नु अनिवार्य हुन्छ । फ्रान्स जाँदा त्यहीको भाषा बोल्नु पर्छ । जर्मन जाँदा त्यहीको भाषा सिक्नु पर्यो । त्यसकारण एशिया, अफ्रिका, बेलायत, क्यानडा, अष्ट्रेलिया तथा अमेरिका जस्ता देश अंग्रेजी भाषाको पिलर भएर बसेका छन् । ती देशमा जाँदा अंग्रेजी भाषा सिक्नु अनिवार्य छ ।
८. जो विदेश जाँदैन र नेपालमा पनि जागिर गर्दैन, त्यसले अंग्रेजी सिक्ने कि नसिक्ने ?
ज्ञानको लागि अंग्रेजी सिक्दा राम्रो । पुस्तकहरु नेपालीमा नपाइने भएकाले र अहिले प्रविधिहरु पनि सबै अंग्रेजीमा भएकाले प्रविधिका लागि र अन्य ज्ञानका लागि अंग्रेजी सिक्नै पर्ने बाध्यता छ । नत्र भने त्यो आवश्यक छैन् ।
९. अंग्रेजी भाषा सिक्ने र सिकाउने कुरामा भ्रम कहाँनेर छ ?
सबैभन्दा ठुलो भम्र अंग्रेजी भाषा सिकाउने शिक्षकमा छ । हामी शिक्षकहरुमा सिक्ने र खोजी गर्ने कुराको कमी छ । शिक्षकको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी यही हो । बच्चाहरुलाई अंग्रेजी भाषा नेपाली जस्तो हैन भनेर हिनताबोध गराइन्छ, त्यो पटक्कै गराउनु हँुदैन । हरेका भाषा उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । उत्तिकै सजिलो पनि भनेर विद्यार्थीलाई बुझाउन सक्नुपर्छ । एकजना बच्चा चेपाङ राम्रो बोल्ने छ र शिक्षकले पनि सो भाषा राम्रोसँग बोल्छ भने उनीहरुले सजिलैसँग अंग्रेजी सिक्न र बोल्न सक्छन् ।
खोजीकै कमीले यो अंग्रेजी भाषा गाह्रो भएको हो । यहाँ विद्यार्थीलाई दोष दिनुपर्ने कुनैपनि कुरा छैन । यहाँ शिक्षकको गल्ती छ । पढाउने शिक्षकले गर्वका साथ म शिक्षक हो भन्ने गरेको नेपालमा देखिँदैन । जीवनमा अरु केही नपाएपछि हिनताबोध भएर शिक्षक हुन्छन् । त्यो हिनताबोध भएकै शिक्षकले पढाएपछि हिनताबोध भएकै विद्यार्थी भविष्यमा उत्पादन बन्न पुग्छन् ।
मेरो पहुँचाका शिक्षामन्त्री हुँदा (जो म नाम लिन चाहान्न) मैले शिक्षामन्त्रीलाई एउटा प्रस्ताव गरेको थिएँ । नेपाल अधिराज्यभरीका सरकारी स्कुलमा ७५ प्रतिशत विद्यार्थी उपस्थिति हुँदा ४० देखि ५० प्रतिशत ल्याउने बनाउन सक्ने क्षमताको विकास गर्नका लागि म तयार छु । म पेशाले कलेजको एउटा प्रोफेसर हुँ । म हरेक कलेज र स्कुलमा अहिले गरिरहेको पेशा छोडेर हरेक जिल्ला जान सक्छु । जिल्ला–जिल्लामा गएर नयाँ खोज गरेर अंग्रेजीलाई सबैभन्दा सजिलो र सरल तरिकाले बच्चालाई पढाउन सक्छु भनेर प्रस्ताव गर्दा शिक्षामन्त्री जस्तो मान्छेले पनि ठाडो कान लगाईदिनु भएन ।
अंग्रेजी सिक्ने सिद्धान्त जुन मैले प्रतिपादन गरेको छु । मैले पीएचडी पढ्दै गर्दा सामान्य स्कुलमा गएर पढाएँ । २ वर्ष त्यस संस्थामा बाँधिएर पढाएको अनुभव छ । त्यहाँ ७५ प्रतिशत विद्यार्थीले एसएलसीमा अंग्रेजी विषयमा पास गरेर रेकर्ड मेरै कार्यकालमा राखेका थिए । खोजी गरेर लाग्ने हो भने विश्वमा अंग्रेजी भाषा जस्तो सजिलो केही छैन् । अंग्रेजी भाषा नेपालीको तुलनामा धेरै सजिलो छ । लेख्ने भन्दा पनि अंग्रेजी भाषा बोल्न धेरै सजिलो छ । त्यसकारण विश्वभर अंग्रेजी भाषा प्रसिद्ध भएको हो ।
१०. अंग्रेजी भाषा यात हिनताबोध यात प्रतिष्ठाको विषय भएको । किन होला ?
हरेक मानिसलाई मौका चाहियो । मौका खोज्दा सबैभन्दा पहिला राम्रो अंग्रेजी बोल्न सक्ने मानिसले यसै पनि कुनै होटेलमा बसेर, रिसेप्सनिस्ट भएर पनि राम्रो पैसा कमाइरहेको छ । तर, एम.ए पास गरेको छ । राम्रो लेख्न सक्छ । तर, अंग्रेजी बोल्न भने सक्दैन भने त्यही रिसेप्सेनिसको काम पनि पाउँदैन । जस्तो म स्कुलको प्रिन्सीपल भएर बस्दा के देखेको छु भने नेपालमा शिक्षकहरुको धेरै राम्रो व्याकरण छ । लेख्न पनि सक्नुहुन्छ तर, उहाँहरु अंग्रेजी बोल्न सक्नुहुन्न ।
यहाँका शिक्षकहरु एम.ए पास गरेको भएपनि शिक्षा क्षेत्रमा नै लागेर शिक्षक भएर काम गर्न सक्दैनन् तर दार्जिलिङबाट आएको मानिस अंग्रेजीमा बोलेकै भरमा काम पाइरहेको छ । जो अंग्रेजी बोल्न पाख्त हुन्छ उसले जुनसुकै जागिर पनि पाउन सक्छ । जागिर खानको लागि भाषा चाहिन्छ । अन्य भाषाले भन्दा अंग्रेजी भाषा बोल्न जानेका कारण मौका जागिर खान पाइन्छ तर अंग्रेजी भाषा बोल्न जानिन भनेर हिनताबोध गर्नुपर्ने कारण केही छैन । जति अंग्रेजी भाषा बोल्दा गर्व महसुुश हुन्छ, त्यति नै नेपाली, संस्कृत भाषा बोल्दा पनि गर्व गर्न सक्नुपर्छ ।
११. हाम्रो स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालयहरुमा अंग्रेजी पठनपाठनबारे तपाईको अनुभव र दृष्टिकोण के छ ?
हाम्रो स्कुल तथा कलेजका शिक्षकहरुमा खोजमुलक शिक्षण प्रविधिको कमजोरी छ । त्यसकारण विद्यार्थीहरु नै उस्ता भनेर हुँदैन । शिक्षा प्रणालीलाई मात्र दोष दिएर हुँदैन । शिक्षकहरुले हाम्रो शिक्षा प्रणली नै यस्तो भनेर नउम्किने हो र आफ्नो जिम्मेवारी सम्झेर अंग्रेजी नजान्दासम्म अगाडी बढ्न सक्नु हुन्न । त्यो कुरा खोजीको विषय हो ।
शिक्षाको पाटोलाई हेर्ने हो भने अंग्रेजी बोल्नुलाई पहिलो प्रथामिकता दिनुपर्छ भनेर सोच्नुपर्छ । आफुले अंग्रेजी नबोल्ने, बोलेपनि त्यो किसिमले विद्यार्थीलाई सिकाउन नसक्ने । विद्यार्थीलाई गाली गर्ने । पढेनौं भनेर उनीहरुलाई हिनताबोध गराइदिने काम शिक्षकबाट हुन्छ । त्यसकारण पठनपाठनमा शिक्षक नै जिम्मेवार हुनुपर्छ । शिक्षक जिम्मेवार बन्नका लागि स्थायी जागिर खाने प्रवृत्तिलाई मेटेर सही शिक्षक हुने प्रविधिको विकास गर्नुपर्छ ।
त्यसैगरी राजनीतिको झोला बोक्ने काम बन्द गर्नुपर्छ । जहाँ राजनीति पस्छ, त्यहाँ शिक्षण पेशालाई हेलाँ गरिन्छ । राजनीतिज्ञहरुले पनि के गर्नुपर्छ भने कामको महत्व बुझ्न सक्नुपर्छ । मानिसले काम कस्तो गरेको छ, कति गरेको छ, त्यसको खोजी गर्नु पर्छ । राजनीतिज्ञले पनि मेरो पक्षको होकी या अर्को पक्षको हो ? भन्ने काम सबै बन्द गर्नुपर्छ । जबसम्म शिक्षकहरु पार्टीगत हिसाबले अगाडी बढ्छन् तबसम्म शिक्षा क्षेत्रमा हुनेवाला केही छैन् ।
१२. हाम्रो प्राज्ञिक क्षेत्रमा ब्रिटिश र अमेरिकन ईङलिस भनेर भेदभाव जस्तो फरक व्यवहार छ, यसमा तपाईको धारणा के छ ?
ब्रिटिश र अमेरिकन ईङलिसमा फरक छ । मैले बेलायत र अमेरिका जाँदा पनि के देखें भने ब्रिटिश इङलिस बोल्ने शिक्षकलाई अमेरिकामा पनि राम्रो मान्ने धेरै रहेछन् । ब्रिटिश इङलिसले एउटा इतिहास रचिसकेको छ । मैले भन्न खोजेको ब्रिटिश इङलिस नै सबैथोक भने होइन ।
हाम्रोमा पनि ब्रिटिश इङलिस नै राम्रो मानिन्छ । पछिल्ला दिनमा अमेरिकाले सबैतिर सहयोग गरेकाले अमेरिकन इङलिसको पनि प्रभाव बढ्दै गएको हो । तर ब्रिटिश इङलिसको छाप कसैले मेट्न सक्दैन । ब्रिटिश अंग्रेजी विकसित पनि त्यतिकै छ ।
अन्य राष्ट्रहरुले इङ्लिस बोल्न बल्ल सुरु गरेका हुन् । बेलायतले धेरै वर्ष पहिलाबाट नै इङ्लिस बोल्न सुरु गरेकाले यसको महिमा धेरै देखिएको हो । पछिल्ला समय अमेरिकन, अष्ट्रेलियन, इन्डियन, अफ्रिकन, क्यानेडियन इङलिस भनिएता पनि बेलायती अंग्रेजीको जति अरु हुन सक्दैन । ब्रिटिस इङलिसको लिगेसी, मिहेनत, महिमा मेटेर मेटिनेवाला छैन । अन्य देशले त भर्खर भर्खर सुरु गरेका त हुन् । भाषा बुझ्नकै लागि हो, अंग्रेजी भाषा आखिर अंग्रेजी नै हो, जुन बोले पनि बुझिन्छ ।
१३. विश्व साहित्यहरु नेपाली भाषामा अनुवाद हुन थालेका छन्, नेपाली साहित्यलाई पनि अंग्रेजीमा अनुवाद गरेर विश्व साहित्यको नजिक पुर्याउने काम कमै भएको छ । यसमा तपाईको धारण के छ ?
लेखनाथ पौडेल, तारानाथ शर्मा, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा जस्ता प्रसिद्ध लेखकहरुको समयमा जस्तो नेपाली साहित्यमा अहिले त्यो उत्कृष्टता छैन । विगतको तुलनामा हिजोआजका दिनमा जति नेपाली साहित्य विकसित भएर जानु पर्ने हो त्यति विकसित भएर गएको छैन् । अहिले नेपाली साहित्य लेख्नेहरु धेरै पश्चिमबाट प्रभावित छौं ।
पश्चिका लेखक तथा साहित्यकारका कृतिहरु हामी धेरै पढ्छौं । मैले भन्ने गरेको छु : तिमीले जे खायौ त्यही अनुसारको तागत हुन्छ र तिमीले जे पढ्यौ त्यही अनुसारको बुद्धि हुन्छ, ज्ञान हुन्छ । त्यसकारण खान पनि राम्रो खाउ र पढ्न पनि राम्रो पढ भन्ने चलन छ ।
माथिको कुरालाई मनन गर्ने हो भने अहिले नेपाली साहित्यमा उत्कृष्ठता, मौलिकता भन्दा पनि कता कता मौलिकता मरेको र उत्कृष्ठतालाई छुन नसकेको जस्तो भान हुन्छ । अंग्रेजी, जमर्नी, चाइनीज, रसियन उत्कृष्ट साहित्यमा छन् । त्यो भन्दा पनि उत्कृष्ट संस्कृत साहित्य हो । त्यो बेलामा लेखिएका संस्कृत साहित्यको तुलनामा अहिलेका साहित्य विकसित हुन सकेका छैनन् । जब देश र स्थानको विकास हुन्छ तब साहित्य र कलाको पनि विकास हुन्छ । त्यसकारण विकसित भइसकेको देशको तुलनामा हामीहरुले उत्कृष्टता दिन नसकेको पनि होला । केही महान् लेखकहरु त छन् तर उनीहरुले साहित्य विकासका काम विस्तारै छोडेर बसेको जस्तो देखिन्छ ।
अर्को पाटो के हो ? नेपाली साहित्यलाई बुझेर उल्था गर्नुपर्ने केही काम भएको छ । जस्तो देवकोटाका कृतिहरु उल्था गर्ने काममा प्रो.डा पदमप्रसाद देवकोटा आफैले अगाडी बढाउनु भएको छ । उहाँको फ्रेन्च र अंग्रेजी राम्रो र उत्कृष्ट छ । डा. देवकोटा आफ्नो पिताको विरासत जोगाउन आफै लाग्नु भएको छ ।
हामी हाम्रा सर्जकहरुलाई चिनेर तिनीहरुलाई चिनाउनु पर्छ भनेर लागेका पनि छैनौं । प्रा. डा. श्रीधरप्रसाद लोहनी, जो नेपालको मात्र नभएर विश्वकै हस्ती हुनुहुन्छ । हामीले उहाँलाई पनि चिन्न सकेको छैनौं । उहाँको मातहातमा बसेर हामीले नेपाली साहित्य उल्था गर्न लागियो भने नेपाली साहित्य धेरै माथि पुग्छ । तर, उल्था गर्ने हामीसँग त्यो क्षमताको विकास पनि भएको छैन ।
१४. हाम्रो देशमा पनि तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि अंगे्रजी सिकाईको काम भएको छ । निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी न त अंग्रेजी राम्रो जान्ने भए न त आफ्नो नेपाली भाषा नै शुद्ध र सन्तुलनका साथ बोल्न र लेख्न सक्छन् । यस विषयमा के भन्नु हुन्छ ?
म आफु पनि आबद्ध भएर धेरै निजी विद्यालयहरुमा काम गरेँ । तर निजी स्कुल कलेजले जति चासो मानेर नेपाली भाषाको जगेर्ना गर्नु पर्ने हो र अंग्रेजी भाषाको उत्थान गर्नुपर्ने हो, दुवै कुरामा विद्यालय र व्यवस्थापनको तत्परता कमै देखेको छु ।
सिर्जनात्मक कुरा पैसाले किन्ने कुरा होइन । सिर्जनात्मकता आफैँमा आउने कुरा हो । सिर्जनाका कुरामा निजीको तुलनामा सरकारी स्कुलहरु धेरै अगाडी छन् । मैले निजी र सरकारी स्कुलमा काम गरकोे छु । अपवादका केही निजी विद्यालय बाहेक अन्य ठाउँमा बल गराएर नेपाली भाषालाई स्थापित गराउने र अगाडी ल्याउने काम भएको पाएको छु । छन्दसमेत अगाडी बढाउनु पर्छ भनेर लागेका निजी विद्यालय पनि छन् । जस्तो रातो बंगला विद्यालयमा छन्दको कविता प्रतियोगिता गराइन्छ ।
सरकारी विद्यालयमा अंग्रेजी भाषाको एउटा विषय पढाउने र निजी विद्यालयमा नेपाली भाषाको एउटा विषय पढाउने परिपाटीका कारण सरकारी स्कुलमा विद्यार्थीलाई अंग्रेजी गाह्रो भएको छ भने, निजी स्कुलमा विद्यार्थीलाई नेपाली गाह्रो भएको छ ।
विद्यार्थीले घरमा पनि अंग्रेजीमा बोलेन वा बुझेन भने यसले जान्दैन भन्ने लोगो लगाइ दिन्छन् । त्यसकारण पनि बच्चाले जाने पनि नजानेपनि घरमा अंग्रेजी नै बोल्छन् । पारिवारिक र सामाजिक वातावरणका कारण बच्चाले नेपाली बोल्नु अभिशाप हो भन्ने सोच्छन् । निजी विद्यालयमा पढेका बच्चाहरुको नेपाली टोन नै विग्रिएको छ । यता सरकारी स्कुलमा पढ्ने नेपाली लवजमा बोलिरहेका हुन्छन् । यसबाट के बुझिन्छ भने नेपाली शिक्षकले नेपालीपन र अंग्रेजी शिक्षकले अंग्रेजीपन दिन सकेनन् । जसका कारण नेपाली बोल्दा अंग्रेजी लवज र अंग्रेजी बोल्दा नेपाली लवज मिसिन पुग्यो ।
दोस्रो कुरा भनेको नेपाली जानेर के हुन्छ र ? अंग्रेजी जसरी पनि जान्नु नै पर्छ भन्ने मान्यता पनि हो । केही नजाने पनि अंग्रेजी जानेपछि शिक्षित हुइन्छ भन्ने बुझाइ हो । धेरै जानेको बुझेको छ तर अंग्रेजी बोलेको छैन भने अशिक्षित हुइन्छ भन्ने धारणा पनि हो । सामाजिक परिवेश यसरी अगाडि बढीरहेको छ । यसलाई र्निमूल पार्ने काम शिक्षकको हातमा नै पुग्छ । अंग्रेजी शिक्षकले नेपाली र नेपाली शिक्षकले अंग्रेजीलाई बढि प्रथामिकता दिनुपर्छ । आफ्नो–आफ्नो भाषाको अस्तित्व छ । यसरी दुईवटा भाषालाई जोगाएर पढाउन, बुझाउन र अगाडि बढाउन सकियो भने यहाँले औंल्याएको जस्तो कमजोरी र्निमूल हुन्छ ।
१५. अंग्रेजी भाषामा शब्दभण्डार कसरी पढाउने ?
धेरै नै सजिलो छ । विद्यार्थीले अलि गाह्रो मान्छन् तर यसमा शिक्षक सजक बन्नु पर्छ । रिडिङ गर्दा वा सुन्दा धेरै जानिन्छ । यो एउटा तरिका हो । शब्दभण्डार बढाउन तरिका धेरै सहज छ । पहिलो कुरा केही आधारभूत शब्द छन् जुन नजानी नहुने शब्दहरु हुन् । अक्सबोर्ड डिस्नेरी पछाडि हेर्नु भयो भने भर्बहरु त्यहाँ दिएका छन् । ३६०–६५ वटा भर्बको लिस्ट छ, ती जान्नै पर्छ । सामान्य भाषा बोल्न र जान्नका लागि ती भर्बले काम दिन्छ । राम्रो अंग्रेजी बोल्नलाई धेरै शब्दहरु चाहिने पनि होइन । पढ्नलाई मात्र धेरै अंग्रेजी शब्द जान्नु पर्ने र चाहिने हो ।
अर्को तरिका भनेको कसरी विश्लेषण, क्रिया, नामयोगी बनेको छ, तीनै शब्दहरु जोडिदै जाँदा एउटै शब्दहरुबाट धेरै शब्दहरु बन्ने तरिका सिकाइ दिनुपर्छ । त्यसपछि उपसर्ग र प्रत्येयको ज्ञान दिने बितिकै शब्द याद हुँदै जान्छ । देख्ने बित्तिकै याद हुन थाल्छ । त्यसले एउटा सामान्य अंग्रेजी पढ्न र बुझनका लागि पनि मद्दत गर्छ । संस्कृत साहित्य बुझ्न र पढ्न माथिल्लो तहका शब्दहरु जान्नु पर्छ ।
जीआरई, टोफल, जीम्याट, स्याट गर्ने विद्यार्थीले सामान्य अंग्रेजी धेरै जानी सकेका हुन्छन् । उनीहरुको करिकुलममा भाषागत ज्ञान पनि राम्रोसँग बुझाउन खोजिएको छ । हाम्रा शिक्षकहरुले यो सिक्दा र बुझ्दा राम्रो हुन्छ ।
१६. क्रियटीभ र साहित्य लेखन लेख्न चाहने व्यक्तिहरुका लागि केही टिप्स छ ?
सृजनामा लाग्ने मानिसलाई भाषाले रोक्दैन । उत्कृष्ट सृजना हो भने राम्रो अंग्रेजी भएकोले त्यस्ता साहित्यलाई उल्था पनि त गर्न सक्छन् । त्यसकारण नेपालमा सृजनाको पाटो कम नै बनाइएको छ । मानिहरुको जीवन र दैनिकीको अधिकांश समय रोजीरोटीको लागि बित्ने भएका करण सृजना पछाडी परेको छ । तर पनि अंग्रेजी धेरै राम्रा बनाएर नेपाली साहित्यमा अगाडि बढ्नु भएको छ ।
सिर्जनाको कुरा गर्दा मैले एउटा छुटाउन नहुने नाम प्रा.डा.सन्जीव उप्रेती हो । जो नाटकमा पनि त्यतिनै अगाडी हुनुहुन्छ । उहाँ सुरुमा नेपाली भाषामा त्यति राम्रो होइन तर अहिले कति राम्रो गर्नुभएको छ । सृजना भन्ने कुरा एउटा व्यक्तिमा हुन्छ । उहाँ अंग्रेजीमा धेरै राम्रो लेख्न सक्नुहुन्छ तर त्यति लेख्नु हुन्न । कम लेख्नुहुन्छ ।
नेपालीमा उहाँले धेरै राम्रो साहित्य लेख्नु हुन्छ । उहाँले म्युजिकमा पनि त्यत्तिकै राम्रो गर्नुभएको छ । सिर्जनामा लाग्ने मानिसले धेरै कुरा त्याग गर्नुपर्ने हुन्छ । तर प्रा.डा उप्रेतीको आधारभूत आवश्यकतालाई पुरा गर्न समय छुट्याउन पर्ने अवस्था छैन् । जसका कारण उहाँ जत्तिको मानिस नेपालमा नेपाली साहित्यमा लाग्दा राम्रो नै हुन्छ ।
१७. नेपाली भाषामा एकदमै दक्ष हुँदा करिअरमा के–के फाइदा हुन्छ ?
जीवनमा म यहाँसम्म आइपुग्नुमा नेपाली भाषाको भुमिका छ । मैले जीवनको केही समय विदेशीहरुलाई नेपाली भाषा पढाएँ । नेपाली साहित्य र पत्रपत्रिकाको क्षेत्रमा पनि राम्रो नेपाली भाषा बोल्न र लेख्न जान्ने मानिसको आवश्यकता छ । नेपाली भाषा लेख्न र बोल्न सक्ने मानिसलाई धेरै मौका आउँछ । नेपाली भाषा राम्रो भएका व्यक्तिले सिर्जनामा, अनुवादका कुरामा, संचारमाध्यममा अवसर पाउँछन् । मानिसले जबसम्म उत्कृष्ट मातृभाषा नेपाली लेख्न र बोल्न जान्दैन तबसम्म अर्को भाषा उत्कृष्ट लेख्न र बोल्न गाह्रो नै हुन्छ ।
मानव बेचबिखन गतिविधिमाथि निगरानी र नियन्त्रण गर्न नगरस्तरीय कार्यविधि १२ मिनेट पहिले
ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको ६६ करोडको आईपीओ फागुन २३ गतेदेखि निष्कासन हुने ३७ मिनेट पहिले
व्यावसायिक कृषिमा रम्दै पोखरेल २२ घण्टा पहिले
शिवरात्रिको अवसरमा ताण्डव नृत्य प्रतियोगिता २२ घण्टा पहिले
पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर कति थपिए संक्रमित ? १७ घण्टा पहिले
डेढ सय वर्ष पुरानो भीमसेन जात्रा झाँकीसहित सम्पन्न १ दिन पहिले
शेरबहादुरलाई उपयोग गरेर एमसीसी पास गराउने तयारी १३ घण्टा पहिले
कांग्रेस नेता मित्रसेन दाहालको निधन ७ दिन पहिले
वडा भवन निर्माणमा तीव्रता दिँदै नमोबुद्ध नगरपालिका २ दिन पहिले
फुजी स्याउप्रति जुम्लाका किसानकाे आकर्षण ४ हप्ता पहिले
ग्लोबल आइएमई बैंकले जग्गा बिक्री गर्दै १ हप्ता पहिले
सरस्वती पूजाको अवसरमा प्रधानमन्त्रीकाे शुभकामना, हरेक व्यक्तिमा प्रज्ञा प्रकाश प्राप्त हाेस १ हप्ता पहिले
‘जाजरकोट घटनाको छानविन गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन’ ९ महिना पहिले
एशिया सेल्टर फोरम’को कार्यशाला काठमाडौंमा हुँदै ३ महिना पहिले
नेपालमा थप २ जनामा कोरोनाको पुष्टि, संक्रमितको संख्या २१९ पुग्याे ९ महिना पहिले